Alaab -qeybiyeyaasha soo -bandhigga Biladda iyo Warshadda - Soo -saareyaasha soo -bandhigga Billadda Shiinaha
SIDA LOOGU SOO DHAJIYAY DHAQAALKA DHAQAALKA DHAQAALKA SANDUUQ Qolka Birdhouse
Qurxinta guriga ee biraha
Saacadda derbiga birta
Qurxinta derbiga birta
Jillaab qurxinta gidaarka
Alaabta guriga ee birta ah
Qofka cadka haysta
Alaabta xayawaanka ee birta ah
Xayawaanka Xayawaanka & Quudiyaha
Haystaha xarigga xayawaanka
Saldhigga qashinka xayawaanka
Qalabka cayaaraha birta
Shelf derbiga birta ah
Rakaabka baaskiilka (A)
Birta Minimalist -ka ah ee baaskiilka cad -goynta cad
Shelf derbi bir ah oo badan oo shaqeynaya
Shelf derbiga birta ah oo loogu talagalay sawirka
Qolka qurxinta ee GURIGA qurxinta
Hangoollaha muujinta biraha dhiirrigelinta
Hanbalyo billad dabaasha
Xirfadlaha bilada isboortiga ee biladaha Orodka iyo Marathon
Shelfkii biraha ee koobabka leh ee la sudhay bilada
Bacda saxaro qaybiyaha saldhigga qashinka xayawaanka ee birta leh ...
Furaha furaha biraha & Hangool Leash Hange
Baaquli quudinta eey oo aan sinnayn
Baaxadda quudinta eeyga xorta ah ee raaxada leh
Suxuunta quudinta eey oo aan fiicnayn
Haystaha warqadda duudduubka jikada
Haystaha warqadda duubka musqusha
Ubaxa nolosha haya duubka
Waajibaad culus: SUP -da iyo saqafka saqafka dusha sare waxaa loogu talagalay iyadoo la isticmaalayo dhammaan birta si ay u adkeyso culeysyada boodhadhyada culus iyo looxyada dhaadheer oo abuuraya raashin kaydinta sabuuradda taam ah oo aad u adag oo raaga. Rack waa 18 inji dheer iyo cudud kasta si ay u taageerto looxyadu waa 25 inji. Dhinac kasta oo rakcaddu waxay qaadi kartaa ilaa 75 rodol.
Lagu hagaajin karo – Rakcadaha waa la hagaajin karaa kor iyo hoosna 10 inji ilaa 18 inji.
Ilaalinta guud: Mid kasta oo ka mid ah hubka ku jira raashka guddiga SUP wuxuu ku qalabaysan yahay suuf aad u qaro weyn si loo ilaaliyo oo looga hortago waxyeellada loo geysto guddigaaga si ka duwan sida looxyada looxaan ee taagga. Qalabkeena birta ah sidoo kale waa mid raagaya oo miridhku u adkaysta inuu u adkaysan karo deegaanka biyaha cusbada leh.
Ku habboon noocyo badan oo looxyo ah: si ka duwan sida badan ee SUP rakooyinka loogu talagalay kaydinta derbiga, kan haysta guddiga guduudku wuxuu hayn karaa 25'' loox balaadhan oo uu qaban karo sabuuradaha, surwaalka, sabuuradaha dhaadheer, skis, iyo Kayaks qaarkood. Dejin deg deg ah oo fudud: garaashyo badan oo sabuurad leh oo garaashka ku kaydsan ayaa adag in la isku geeyo. Fuulaheena boodhka taranka waa fududahay in la sameeyo! Biraha birta ah ee leh qalabka la siiyay ayaa si sahal ah loogu dhejin karaa saqafka iyo gacmaha suufka ah ee kufsiga ayaa godka u galay si loo helo dejin sugan oo sahlan.
OEM & ODM: Waxaan sameynaa dhammaan alaabada birta ee la habeeyay, sidoo kale kooxdayada naqshadeynta xirfadda leh waxay abuuri karaan naqshado iyadoo loo eegayo fikradda macaamiisha.
Naqshad: Naqshadaha handa bilaha asalka ah.
Tayada: Waxaa laga sameeyay alaab bir ah oo aad u culus. Aad u xoog badan, adag, oo leh tafaasiil kaamil ah. 100% kormeerka tayada kahor shixnadda.
Cabbirka: 12 ”L, 14” L, 16 ”L, 18” L iwm.
Dhammee: Budada waarta oo lagu daboolay naqshadaha madow, Midabka lacagta gacanta lagu cadayay ee naqshadaha birta aan lahayn.
Maaddada birta oo dhumuc weyn, si fudud uma foorari doonto.Rusty free.Wurable
Waxaan ku jirnay naqshadeynta iyo soo saarista hangalada bandhigyada billadaha in ka badan 10 sano.In ka badan 200+ naqshado in kabadan 30 biladood oo isboorti oo kala duwan.
Hanbalyada bilad -isboortiga ee billadaha isboortiga ee kala duwan
Naqshad: Naqshad samayska birta asalka ah, fudud laakiin xarrago leh.
Cabbirka la heli karo: 40cm L, oo ​​leh laba clips magnetic ah oo lagu hayo baalasha tartanka ama sawirka.
Dhammee: Budada waarta oo lagu daboolay madow.
Si Weyn Loo Adeegsaday: Muuji koob, qurxin yar, billado sudhan, qabta baalasha tartanka ama sawir.
Shelf derbiga birta ah si loo muujiyo Koobka iyo billadaha.
Shefkii koobkii alwaax ee jillaab bilad ah
Naqshadeyn: Naqshad alwaax badan oo shaqeyneysa, oo u fiican koob bandhig iyo billado.
Tayada: Waxaa laga sameeyay alwaax geed geed adag ah, oo gacanta lagu rinjiyeeyay rinji
Cabbirka: 17 ”L
Xidhmada: 1pc/box.12pcs/kartoon.Accept xirmo sanduuq hadiyado kartoo.
Hantiilaha bilada RUNNER
Naqshadeeyayaasha bilada RUNNER fudud oo xarrago leh.
Block C Zongxin Industrial Park Shijie Hengjiao Shijie Dongguan 52301 Shiinaha
Xuquuqda daabacaadda - 2011-2021: Dhammaan Reserved Rights.
Qabatooyinka Furaha Furaha, Coat Hanger Rack Hooks, Hanjabaadda Dheriga Dhirta, Qaansarka Warshada Darbiga, Qabanqaabiyaha Hook Furaha, Farshaxanka Darbiga Birta,